Global Voices teny Malagasy » Topimaso amin’ny tanjon’ny Emirà Arabo Mitambatra mba hanana angovo azo havaozina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Avrily 2019 5:01 GMT 1	 · Mpanoratra Sania Aziz Rahman Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Emirà Arabo Mitambatra, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Tamin'ny Janoary, namoaka tatitra  iray ny “International Renewable Energy Agency (IRENA)” (Masoivoho iraisampirenena momba ny angovo azo havaozina) namaritany ny fironan'ny tsenan'ny “Gulf Cooperation Council (GCC)” ( Filankevitry ny Fiarahamiasa ao Golfa ) ary nandalinany momba ny sehatry ny angovo azo havaozina. Ny ao Emirà Arabo Mitambatra, hoy ilay tatitra, no manana ny 79 isanjato amin'ny fotodrafitrasa fakàna angovo azo avy amin'ny masoandro manerana ny GCC. “Vitan'ilay firenena ihany koa ny nisarika ireo tetikasa misahana famokarana angovo azo avy amin'ny masoandro, tsy andaniambola be , tsy ilàna fanohanana ara-bola” .
Mandritra izany, Sharjah, ilay emirà lehibe indrindra ao anatin'ny firenena, dia mikendry ny hanorina  ‘tanàna maharitra’ mivelona amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro, miala 11 kilaometatra eo ho eo amin'ny seranampiaramanidina iraisampirenen'i Sharjah. NY governemantan'i Umm Al Quwain, emirà iray hafa ao anatin'ny UAE, koa dia manatontosa drafitra iray hanorenana saha-masoandro iray hamokarana 200-megawatt ao Falaj al Mu'alla,.
Etsy ankilany, mbola mamatsy vola ny vidin'ny solitany sy ny entona voajanahary ihany koa ny UAE, na dia efa nasiana haba TVA 5% aza ny lasantsy sy ny solika mavesatra. Nefa ny vidin'ny lasantsy sy ny solika mavesatra efa tena ambanin'ny salanisa erantany. Ny Aprily 2019 , 1.14 dolara amerikàna ny vidin'ny solika 1 litatra manerana izao tontolo izao, raha 0.57 dolara amerikàna ny litatra tao UAE.
Mampiasa vola be amin'ny resaka angovo voajanahary (bioenergy) ihany koa ny UAE.Ohatra, tamin'ny 2017 dia nosoniavin'ny Masdar (orinasa mpamokatra angovo azo havaozina) ny fifanarahana fampandrosoana iray iarahany amin'ny Bee'ah, orinasa misahana ny fitantanana tontolo iainana, mba handrafetana ny ozinina voalohany mpanodina fako ho lasa angovo ao UAE. Ao amin'ny Ivontoerana Fitantanana ny Fako ao Sharjah no hasiana  io ozinina io.
Kendren'ny UAE ny hamaly ny 30 isanjaton'ny filàny angovo amin'ny alàlan'ny angovo madio hatramin'ny 2030. Amin'izao fotoana izao, ambaran'i  UAE fa ananany ny 0.54 isanjato amin'ny angovony madio, tafiditra anatin'io ny angovo azo havaozina miampy angovo nokleary.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/24/137810/
 Masdar tao amin'ny Flickr: https://www.flickr.com/photos/94219060@N03/8576431851/in/photostream/
 mikendry ny hanorina: https://medium.com/r/?url=https%3A%2F%2Fwww.thenational.ae%2Fbusiness%2Fproperty%2Fsharjah-to-build-dh2bn-solar-powered-sustainable-city-1.842037
 Climate Action Tracker : https://climateactiontracker.org/countries/uae/
 Aprily 2019: https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
 hamaly ny 30 isanjaton'ny filàny : https://medium.com/r/?url=https%3A%2F%2Fgovernment.ae%2Fen%2Fabout-the-uae%2Fleaving-no-one-behind%2F7affordableandcleanenergy